Japan: Hadisoana ve ny mihanika ny havoanan’i Fuji amin’ny tànam-polo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2010 6:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Raha misy hazo midaraboka any an'àla nefa tsy misy olona afaka handre izany eo amin'ny manodidina eo, dia ho olana ve raha mitalakotrokotroka na tsia izany arakarak'izay nanaovan'ilay hazo azy teo? Nandinika lalina momba ny tendrombohitra, ny môraly/fitondrantena, ary ireo hafatra ao anaty lahatsoratra iray amin'ny teny Japoney mitondra ny lohateny hoe “Hadisoana ve ny mihanika ny havoanan'i Fuji amin'ny tànam-polo?“, ilay mpitoraka blaogy Mojix.
Fanamarihana: Ny lahatsoratra dia nadika manontolo miaraka amin'ny fanomezan-dàlan'ilay mpitoraka blaogy. Napetrak'i Tomomi Sasaki ho toro-làlana ireo rohy rehetra.
Sarin'ny Havoanan'i Fuji avy amin'ilay mpampiasa Flickr TANAKA Juuyoh (田中十洋) mampiasa ny Creative Commons Attribution license
Ampahany avy amin'ny lahatsoratry ny Yomiuri tanaty aterineto “Olona mihanika ny Havoanan'i Fuji amin'ny tànam-polo sy noho ny monkon-dohany fotsiny, mila vonjy”, nivoaka tamin'ny 3 Jolay, 12:07: (Fanamarihana: ilay lahatsoratra dia tsy hita intsony ao amin'ny aterineto)
2 Jolay, 21:45 – Lehilahy iray niantso ny polisy avy ao amin'ny Fiantsonanan Fahavalo ao amin'ny Havoanan'i Fuji [haavo: 3,250 metatra], nilaza hoe “ Eo ampihanihana ny havoanan'i Fuji aho nefa tsy nitondra jiro ho fitsilovana. Maizina be tsy ahitàna ny làlana aty ka matahotra aho. Miangavy, mba ampio re aho”.
Mpamonjy voina enina avy ao amin'ny Prefektioran'ny polisy ao an-tanànan'i Fujinomiya Shizuoka no nanainga tokony ho tamin'ny 11:30 alina ka namonjy ilay lehilahy efa tafanika tany amin'ny Fiantsonana Fahaenina [Sixth Station] [haavo: 2,490 metatra] tany samirery. Tsy naninona ralehilahy. Araka ny filàzan'ny tao an-tanàna, pachinko 22 taona izy ary mpiasa amina toeram-pikolokoloana vatana avy any Nakano Ward ao Tokyo. Teo amin'ny Fiantsonana Fahadimy, tokony ho tamin'ny 5:00 hariva teo ranamana no nanomboka nihanika ny Havoanan'i Fuji nanàraka ny Soritra Fujinomiya. Nony tonga teo amin'ny Fiantsonana Fahasivy [haavo: 3,460 meters], tapa-kevitra ny hiato ranamana ary nanomboka nidina talohan'ny niantsoany vonjy tamin'ny alàlan'ny findainy rehefa nanomboka tonga ny haizina.
Lobaka lava tànana, jeans ary kiraro sneakers (karazana tennis) no nanaovan-dranamana. Tsy nisy na inona na inona teny an-tànany; tsy nitondra sakafo na fitaovana koa izy. Nanomboka tamin'ny 1 Jolay ny fotoam-pianihana ny Havoanan'i Fuji nefa ny maripàna eny akaikin'ny Fiantsonana Fahaenina dia manodidina ny 2°C . Tsy mbola nanana traikefa amin'izay fihanihana havoana akory ranamana ary dia tena feno fialan-tsiny tokoa, hoy izy “Monkon-doha fotsiny no nanombohako nihanika”. Hoy ny tao amin'ny Tànana hoe, “ Fihetsika iray tsy voahevitra monja dia mety resaka ho velona sa ho faty no tohiny. Iangavianay ny tsirairay mba ho ampy fiomanana tsara eo am-pahatongavana, eny fa na dia amin'ny fihanihana tendrombohitra rehefa lohataona aza.”
Jereo ity sary ity hahitàna ny haavon'ny Fiantsonana tsirairay ao anatin'ilay lahatsoratra ” Tari-dàlana iray ho fihanihana ny Havoanan'i Fuji sy hankafizana ilay Reny Natiora” avy amin'ny Sampan-draharaha Japoney misahana ny Fizahantany [Japan National Tourism Organization].
Manohy manazàva ny fomba fijeriny i Zope taorian'ilay ampahan-dahatsoratra.
Amina mpihanika efa voky fahalalàna, ny fanandràmana hianika ny Havoanan'i Fuji nefa tsy mivatsy fitaovana dia tena hadalàna. Mety hilaza izy ireo hoe, “Aza hamaivanina ny fihanihana tendrombohitra!”. Na Havoanan'i Fuji io na ny Tendrontany Atsimo aza, heveriko fa zava-dehibe mipetraka amin'ny tsirairay ny fanapahan-kevitra tokony horaisiny.
Tena ilokàko fa be ny olona mihanika tanam-polo ny Havoanan'i Fuji. Lasa resa-be anaty fampahalalam-baovao toy izao ilay izy rehefa misy tsy fetezan-javatra mitranga saingy mety ho betsaka ny olona no tafaverina tsy misy maratra. Angamba aza izy ireny mbola miverina mihevitra hoe, “Oh, tena mora be ilay izy teo satria tsy nitondra na inona na inona aho”.
Amin'izao fotoana, ny olana dia rehefa very na maty ny olona iray. Mila famonjena izy ireo amin'izay fotoana, izay miteraka fandaniana ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Na dia tsy nisy ezaka famonjena natao aza ka maty any ry zareo, tsy azo avela any an-tampon-tendrombohitra any mihitsy ny faty. Enta-mavesatra iray izany ary tsy maintsy aloan'ny fiarahamonina ny lany aminy.
Tsy ny mikasika ny fihanihana ny Havoanan'ny Fuji tsy miaraka amina fitaovana loatra no resaka. Ny resaka dia mikasika ny “tsy fahafahana mandray andraikitra feno amin'izay ataon'ny tsirairay” sy ny “fanomezana olana ho an'ny fiarahamonina” isak'izay misy zava-mitranga.
Amin'ny lafiny iray, raha afaka mandray andraikitra feno ny olona iray ka tsy miteraka olana ho an'ny fiarahamonina, tsy misy zavatra tokony horaràna mihitsy, eny fa na dia izay fikasana faran'izay adala indrindra aza.
Ilay lehilahy navotana dia nofaritana ho pachinko 22 taona ary mpiasa amina toeram-pikolokoloana vatana avy any Nakano Ward ”. Ny teny nisoratra teo amin'ny fitafiany miaraka amin'ny fanamarihana hoe “ tsy mitondra na sakafo na fitaovana” dia mahatonga ny mpamaky hanana eritreritra fa olona tsy mivaky loha, ary angamba aza tsy mitandrina, ilay akama. Mba saino kely ange e, marina mafy! Very ny olona rehefa ho very ary maty rehefa ho faty… na dia ireo manampahefana matanjaka sy ireo mpitàna birao ambony aza, ary na dia nitondra fitaovana feno aza. Raha ny marina, ireo manana traikefa no azo lazaina ho mananton-doza kokoa noho ny fitokisan-tena diso toerana [Avy amin'ny mpandika: toy ilay ohapitenenana Malagasy hoe ‘Izay mahay milomano ihany no maty an-drano’].
Izay tena tiana havoitra amin'izy ity dia hoe ny karazan-dahatsoratra toy itony dia iray amin'ireo endrika “filazàna ho tombontsoam-bahoaka”. Raha marobe ny olona mety hanomboka hihanika ny Havoanan'i Fuji nefa tsy hivatsy fitaovana sahaza akory, be ny mety ho fitomboan'ny fisavoritahana ary ny vidin'ny asa famonjena koa hidangana. Noho izany, milaza amintsika ry zareo mba ho ampy fitaovana tsara rehefa hihanika ny Havoanan'i Fuji. Sahala amin'ireny Kilasy fampianarana Fitondrantena/Môraly any amin'ny Ambaratonga Fototra ireny ilay izy, saingy mandritry ny taona sy ampiasàna ny fampahalalam-baovao ho an'ny daholobe.
Tsy dia hanohina loatra ny fahalalahantsika izay fandraràna iray atao mikasika ny fihanihana ny Havoanan'i Fuji tsy mitondra fitaovana. Na izany aza, goavana kosa ny fiantraikany rehefa ny famerana ny famokarana menaka fanosotra Konjac no lohahevitra, na fivarotana fanafody amin'ny alalan'ny aterineto, fampiasàna mpiasa an-tselika, na fanapahana fifanarahana arak'asa. Ny toerana rasin'ny governemanta matetika dia ny fanomezana vahana ny karazana fameperana henjana amin'ny lohahevitra toy ireny. Vokatr'izany, izay mety ho vaovao mifangaro tsirona “Filazàna ho an'ny tombontsoam-bahoaka” dia lasa maka endrika “loza mitatao satria tsy misy mihitsy fameperana atao eo an-toerana. Raha manao lalàna isika, azontsika atao ny misoroka ireny loza ireny.” Ny lafy ratsiny, ny sandany, na ny tsy ara-drariny mety haterak'ireny didy fanapahana ireny dia tsy mahazo fankasitrahana mihitsy.
Raha tsy azo lavina fa nanao zavatra kidaladala ilay rangahy, ny fitanisana teboka iray ilazàna fa izy dia “ pachinko 22 taona miasa amina toeram-pikolokoloana vatana iray” dia manome endrika filazàna tolo-barotra iray tsara ketrika. Raha olona nanana ny toerany na mpiasa birao ambony izy, tena misalasala aho raha hoe hahataitra ireo mpanely vaovao izany.
Isaorana i Ziggy Okugawa tamin'ny fanampiany tamin'ny fandikàna.